Anorexia Nervosa - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Anorexia Nervosa
Anorexia Nervosa ကဘာလဲ။
Anorexia nervosa ဆိုတာ အသက်အရွယ်၊ အရပ်အမောင်းနဲ့ မလိုက်ဖက်အောင် နည်းလွန်းသော ကိုယ်အလေးချိန်ရှိနေစေတဲ့ စားသောက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ရောဂါရှိနေသူတွေဟာ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်နည်းနေသော်လည်း မိမိကိုယ်အလေးချိန်အပေါ် အထင်အမြင်မှားမှုရှိနေပြီး ဝလာမှာ အလွန်ကြောက်နေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပိန်အောင် အစားလျှော့ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ အခြားနည်းလမ်းများ ဥပမာ ဝမ်းနှုတ်ခြင်း၊ အန်အောင်လုပ်ခြင်းတို့ကို အလွန်အကျွံလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
Anorexia Nervosa က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်မတိုင်မီ/ ဆယ်ကျော်သက်/လူငယ်အရွယ်တွေမှာ စဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မကုသဘဲထားလျှင် ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်နည်းပြီး အသက်အန္တရာယ်ပါ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Anorexia Nervosa ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Anorexia nervosa ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာတွေကတော့
ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် နည်းနေသော်လည်း ဝမှာ ဝိတ်တက်မှာ အလွန်ကြောက်နေခြင်း
ဆီးသွားအောင် ဆီးဆေးသောက်ခြင်း၊ အန်အောင် ဝမ်းနှုတ်ဆေးသောက်ခြင်း
ရာသီဥတုမကောင်းဘဲ သို့မဟုတ် နာကျင်နေလျက် ပင်ပန်းနေလျက်ပင် လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်လုပ်နေခြင်း
အစားအစာကို ချိန်တွယ် ကယ်လိုရီတွက်ချက်၍ စားသောက်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Anorexia ကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်စေပြီး အချို့လူတွေမှာ နေထိုင်ပြုမူပုံပြောင်းသွားတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အစားအသောက်နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်အကြောင်း တချိန်လုံးပြောနေတာ၊ လူတွေရှေ့မှာ အစာမစားတာ၊ စိတ်ပြောင်းလဲလွယ်တာ၊ ဝမ်းနည်းနေတာ၊ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အပြင်မထွက်ချင်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Anorexia ရှိတဲ့သူတွေမှာ အောက်ပါ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်
နှလုံးနှင့် ဦးနှောက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန်နည်းနေလျှင် Anorexia ဟာ အသက်အန္တရာယ်အထိ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Anorexia ရှိတဲ့ လူအများစုဟာ သူတို့မှာ ပြဿနာရှိတယ်မထင်တဲ့အတွက် ကုသမှုကို ငြင်းဆန်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို အမြဲကူညီထောက်ပံ့သင့်ပြီး သူတို့မှာ ပြဿနာရှိကြောင်းနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုကြောင်း နားချရပါမယ်။
Anorexia Nervosa ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Anorexia nervosa ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းအတိအကျကို မသိပါ။ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ အခြားစိတ်ရောဂါများနှင့်လည်း ပတ်သတ်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇ၊ ဟော်မုန်းများနှင့်လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက် မီဒီယာများမှ အလွန်ပိန်သော ခန္ဓါကိုယ်အချိုးအစားများကို အားပေးခြင်းဖြင့် လူတွေရဲ့ အလှအပဆိုင်ရာ အမြင်တွေကို လွှမ်းမိုးလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Anorexia Nervosa ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Anorexia nervosa ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုရောဂါရာဇဝင်။ သင့်အမေ/အစ်မမှာ Anorexia nervosa ရှိလျှင် သင့်မှာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုများပါတယ်။
မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုနည်းပါးခြင်း။ Anorexia ရှိတဲ့လူဟာ သူ့ကိုယ်သူ စိတ်တိုင်းမကျနိုင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူ့ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို မုန်းနေပြီး မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေသလို ခံစားနေရပါမယ်။ အဘက်ဘက်က ပြည့်စုံနေအောင် မဖြစ်နိုင်တဲ့ပန်းတိုင်တွေ သတ်မှတ်ပြီး ကြိုးစားနေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘဝတဆစ်ချိုး အပြောင်းအလဲနှင့် စိတ်ဖိစီးစရာများ။ ထိခိုက်နစ်နာဖွယ်ကိစ္စ (ဥပမာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရခြင်း)၊ စိတ်ဖိစီးစရာကိစ္စ (ဥပမာ အလုပ်အသစ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း) တို့ကြောင့်လည်း Anorexia ဖြစ်စေပါတယ်။
လူမှုမီဒီယာ၏ လွှမ်းမိုးမှု။ တီဗွီ၊ အင်တာနက်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်များမှာ ပါဝင်တဲ့ ပုံများဟာ ပိန်တဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အချိုးအစားကို အားပေးနေပါတယ်။ ဒီပုံရိပ်တွေကြောင့် ပိန်ခြင်းနဲ့ လှပခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတို့ကို တွဲဖက်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Anorexia nervosa ဖြစ်ပွားမှုကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
သင့်မှာ Anorexia nervosa မဖြစ်ဘူးလို့
ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာမှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Anorexia Nervosa ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်က ရောဂါရာဇဝင်ယူခြင်း အထူးသဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အစားအသောက်အကြောင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အခြားရောဂါများမဟုတ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ Anorexia nervosa အတွက် သီးသန့် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးငယ်များမှာ ရောဂါမရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အမင်းကျဆင်းခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က အောက်ပါမေးခွန်းများ မေးပါမယ်။
သင့်ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် တနည်းနည်းနဲ့ လုပ်နေသလား။
ဗိုက်အရမ်းပြည့်တယ်လို့ ခံစားရပြီး အန်ထွက်ဖူးသလား။
သင်အရမ်းပိန်လွန်းတယ်လို့ သူများတွေက ပြောသလား။
အစားအသောက်ကို နောက်မှစားဖို့ ဝှက်ထားရတာမျိုးရှိလား။
သင့်မိသားစုထဲမှာ စားသောက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာရှိနေတဲ့လူရှိလား။
Anorexia လို့ သံသယရှိပါက ဆရာဝန်က အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ပါမယ်။
အရိုးပါးမပါးသိနိုင်အောင် အရိုးသိပ်သည်းဆ စစ်ဆေးခြင်း
ကျောက်ကပ် နှင့် အသည်း စွမ်းဆောင်ရည်စစ်ဆေးခြင်း
Anorexia Nervosa ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Anorexia nervosa ကုသခြင်းမှာ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုကတော့ လူနာကို သူ့မှာရောဂါရှိကြောင်း သိလာအောင် ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Anorexia
ရှိတဲ့ လူအများစုဟာ သူတို့မှာ စားသောက်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာမရှိကြောင်း ငြင်းဆန်တတ်ကြပါတယ်။ အခြေအနေဆိုးရွားလာမှသာ ကုသမှုခံယူတတ်ကြပါတယ်။ Anorexia အတွက်ကုသမှုများကတော့
အသက်ငယ်သူများ Anorexia ဖြစ်တာမကြာသေးသူများကို ကျန်းမာတဲ့စားသောက်မှုပုံစံ ပြန်ရဖို့ စကားပြောပေးတဲ့ ကုထုံးသုံးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက်သုံးသောဆေးများ၊ စိတ်ရောဂါဆေးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများ ကိုလည်း အချို့ Anorexia ရောဂါရှင်များကို ကုသရာမှာ ကုသမှုအစီအစဉ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးများက စိတ်ကျခြင်းနဲ့ ပူပန်သောကကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘယ်ဆေးကမှ ပိန်ချင်စိတ်ကို ပျောက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Anorexia nervosa ကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် Anorexia nervosa ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်မှာ Anorexia ရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံလိုက်ပါ။
ဆရာဝန်/ အာဟာရပညာရှင်က ညွှန်ပေးတဲ့ အစားအစားများကို စားပါ။
ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများကို သောက်ပါ။
တော်တဲ့ အဝတ်အစားများကိုသာ ဝယ်ပါ။ ဝိတ်ကျမှ ဝတ်လို့ရမယ့် အဝတ်များကို မဝယ်ပါနှင့်။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 869
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Print edition. Page 876
Anorexia Nervosa Fact Sheet. Womenshealth.gov. http://womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/anorexia-nervosa.html. Accessed Jul 15 2016
Anorexia Nervosa: MedlinePlus Medical Encyclopedia. National Library of Medicine - National Institutes of Complementary, alternative, or integrative health: What's inaname? National Center for Complementary and Alternative Medicine. http://nccam.nih.gov/health/whatiscam. Accessed Jul 15 2016
Eating Disorders: About More Than Food. NIMH. http://www.nimh.nih.gov/health/publications/eating-disorders-new-trifold/index.shtml. Accessed Jul 15 2016
Health. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000362.htm. Accessed Jul 15 2016